အမျိုးသမီးနဲ့ …………………….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အမျိုးသမီးနဲ့ ……………………..
Posted by ဇီဇီ on Apr 17, 2014 in Community & Society, Creative Writing, Cultures, Society & Lifestyle | 58 comments
ကျနော် ကွန်ပလိမ်းစာတို့ ဆုံးမစာတို့ ရေးလေ့မရှိပါဘူးနော့။
သူများကိုလည်း ပြုပြင်ဖို့ ကြိုးစားတတ်တဲ့သူထဲလည်း မပါပါဘူးးး
ကိုယ်တိုင်က လိမ္မာတယ်လို့ မ မှတ်ယူတာ တစ်ကြောင်းးး၊
ဘာမှ တတ်တဲ့သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သိလို့တစ်ကြောင်းးး
ဘယ်သူ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် တကိုယ်စာ နေကောင်းနေရင် ဘာမှ စိတ်မဝင်စားတာက တစ်ကြောင်းးး
ဘာမှ ဆို ဖြေရှင်းလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ကိုင်စွဲထားတာ က တစ်ကြောင်းးး၊
ကိုယ်လုပ်ချင်ရာကိုယ်လုပ် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံကြ ဆိုတဲ့ အတွေးရိုင်းရိုင်းရှိတာက တစ်ကြောင်းးး၊
နောက်ပြီး ဇောနဲ့ ပြောရင် နောက်က ဒေါသ၊ ဒေါသ နောက်ကမှ စကား ကြမ်းကြမ်းက ပါလာတတ်လို့ တစ်ကြောင်းးးး
အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် နေသာသလောက်ကို လေညာကနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။
အွန်လိုင်းမှာ အစားအသောက်လိုင်းယူထားပြီး လေသံချိုချိုနဲ့ သူများ အကူအညီယူနေရတဲ့ ဘွလေးကို ပျော်လို့ အဲ့ဒီဘွပျက်မှာလည်းကြောက်လို့ အမြင်မတော်ဘူးထင်ရင်လည်း ဘာမှ ပြောဘူးရယ်။ ငိငိငိ။
ခုတော့ ပြောချင်စိတ်များလာလို့ ပြောပါရစေနော်။ နည်းနည်းတော့ နောက်ကျနေပြီလားမသိ။
သာမာန် အချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေ အမြင်မတော်ပုံတွေ အွန်လိုင်းမှာ မတက်လာသလောက် ရှိပါတယ်။
ထမီ စကပ် အကြပ်လောက် ဝတ်စားထားတာကို ရင်ခုန်ပြီး လက်ဆော့တင်တတ်တဲ့ သူတွေ တင်တာမျိုးက လွဲရင်ပေါ့။
သင်္ကြန် ဆိုရင် များတော့ ပုံတွေ တစ်တစ်ခွခွ တက်လာပါပြီ။
ဒီ ညနေ ဒီ ကိစ္စ တဂျားနဲ့ ပြောဖြစ်ပြီး ပို့(စ) လေး ရေးဦးမှ ဆိုတော့ ဒီ မန်းလေးသားက ယဉ်ကျေးမှုလေးပါ ပါအောင်တို့ ဘာတို့ ရေးလို့ပြောပါတယ်။
ကျနော် ယဉ်ကျေးမှု ကိစ္စ မကိုင်ပါဘူးးးး
(ကိုယ်တိုင်လည်း ယဉ်ကျေးတဲ့ထဲ မပါ၊ ယဉ်ကျေးမှု လို့ ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့ ဟန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်း အယုံအကြည်မရှိတာလည်းပါပါတယ်။)
အဲဒီတော့ ဒီ ကိစ္စတွေကို ကျနော်ပြောတတ်သလိုပဲ ပြောပါရစေ။
အမျိုးသမီးတွေကို ပြောတာမို့ အမျိုးသားများဘက်ကို အနည်းငယ် ထိခိုက်သလိုဖြစ်ရင်သာ ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့။
၁) အမျိုးသမီးးး နဲ့ အမျိုးသား
အခွင့်အရေးအတူတူ ရသင့် မရသင့် ကျနော် မငြင်းပါဘူးးး တူမှ မတူတာ။ ခန္ဓာဗေဒ အားဖြင့် မတူညီအောင် ဖွဲ့စည်းထားတာမို့ အလုံးစုံ တူအောင် လိုက်တုလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့ သိထားရပါမယ်။
အဲဒီတော့ အမျိုးသားတွေ လုပ်တာ အကုန်လိုက်လုပ်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ သဘာဝကိုက ဒီလိုပေးပြီးသားကို။
အဲ! သူတို့ ကို ကျော်နိုင်တာ အတွေးအခေါ်လေးရယ်၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုလေးရယ်ကတော့ ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူလို့ရတယ်လေ။
သူတို့က တန်းတူ အခွင့်အရေးပေးပါတယ်တို့၊ ညီတူမျှတူ ဆိုတဲ့ စကားလုံးများသုံးလာရင် အဲဒီ အချိန်ဟာ အရက် အတူသောက်စေချင်တဲ့ အချိန်တို့၊ ညနက်သန်းခေါင် လည်ပတ်စေချင်တဲ့ အချိန်တို့ပါ။ (ဥပမာနော်)
အတွေးအခေါ်ကောင်းမဲ့ စာတို့၊ သူတို့ကို အထင်မကြီးမဲ့ စာတို့များဖတ်မိရင် ဖတ်မိတဲ့ ကိုယ့်သာမက စာရေးဆရာကိုပါ ပဲ့ကျနေအောင်ပြောတတ်တာ။ (အဟွတ်! ဒါလည်း ဥပမာပဲ)
မိန်းမတွေ ညံ့လေ ယောင်္ကျားတွေက သူတို့လုပ်ချင်ရာလုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိလေပါ။ ထားပါလေ။ ကျနော်က အမျိုးသားမကောင်းကြောင်း ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးးး
သင်္ကြန်မှာ ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ အရက်ပြိုင်သောက်ပြီး လူမှန်းသူမှန်းမသိတဲ့ ပုံတွေ တွေ့မိလို့ ပြောမိတာပါ။ တန်းတူ ရင်ဘောင်တန်းလိုက်ရမှာသည် ဒီလို သတိလက်လွတ်မူးတဲ့ နေရာမျိုးမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပြောချင်တာ။
ဟိုနေ့ကပဲ ကော်မန့်တစ်ခုမှာ မြင်လိုက်တယ်။ အဲလို သတိလွတ်နေတဲ့ ကောင်မလေးကို သူ့ ရည်းစားဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ ဟိုတယ်ခေါ်သွားပြီး ဗီဒီယိုပါရိုက်ထားတယ်တဲ့။ သူတို့ အခေါ် အဝေါ် ဘူဖေးစားတယ်ခေါ်သတဲ့။ နောက်ပြီး အဲဒီ ဗီဒီရိုနဲ့ ငွေညှစ်သလိုပဲ အဲဒီကောင်မလေးကို ခြိမ်းချောက်ပြီး လိုတိုင်းခေါ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၂) အမျိုးသမီးနဲ့ အရက်
အထက်က ပြောခဲ့လို့ ကျနော်က မိန်းမတွေ အရက်သောက်တာကို ရှုံ့ချတာမဟုတ်ဘူးနော်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင် တံဆိပ်မျိုးစုံ အခွင့်အရေးရရင် ရသလို စမ်းဖူးတယ်။ ဘီယာတို့ ဝိုင်တို့ ဆိုတာ မူးကို မမူးတတ်တော့။
အူအရိုင်း သူငယ်ချင်းတိုင်းကို ကျနော်က စတိုက်ပြီးမှ အူမရိုင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ ဘာလို့ ဆို အူအရိုင်းမှာ အရည်နည်းနည်း ဝင်တာနဲ့ မူးကောင်းပြီး နီးစပ်ရာကောင်က လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့ထဲ ပါသွားမှာဆိုးလို့ပါ။
ကျနော် စသောက်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း အူမရိုင်းအောင်ပါ (မိုက်တယ်နော်၊ အကြောင်းပြချက်က၊ ငိငိငိ)။
ဒါပေမဲ့ အရက်မူးလို့ ဘာမှ မသိ၊ ဘာမှ မမှတ်မိအောင် သောက်တာမျိုးတော့ စတုပစ်ဖြစ်လွန်းတယ်လို့ပဲ ပြောပါမယ်။
အလွတ်အကျွတ် ဆိုတာ သံသရာက လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း ကိစ္စမှာပဲ သုံးလို့ ကောင်းတဲ့ စကားလုံးပါ။ အရက်ဝိုင်းတို့ ဘားတို့ ကလပ်တို့ လူမြင်ကွင်းတို့မှာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့နော့။ သတိနဲ့ ယှဉ်စေချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ကမှ ကြိုက်လွန်းလို့ မူးချင်ဆောင်ပြီး ကြံစည်ရတာမျိုးတော့ မပြောပါဘူးးး နိုင်မယ်ထင်မှတော့ လုပ်ကြပေါ့။
ခုက အလိုမတူပဲ သတိလက်လွတ် ပါသွားမှာကို စိုးတာပါ။ ဘူဖေးဘဝ မရောက်စေချင်လို့ ပြောပြတာပါ။
၃) အမျိုးသမီးနဲ့ ချစ်သူရည်းစား
ခုနက ပြောခဲ့တာက ကိုယ်က သောက်ချင်လို့မှ အလွတ်အကျွတ်သောက်တာကိုပြောတာ။ တစ်ချို့က ညာတိုက်တာတို့၊ ဆေးခတ်တာတို့ ရှိတယ်လေနော့။ ကိုယ့်ကို ချုပ်ပြီး တိုက်တာမျိုး မဟုတ်သရွေ့ ဘယ်သူ့မှ မယုံတာကောင်းတာပေါ့နော့။
ကျနော်က “ခု ချစ်သူရည်းစားတွေကို ယူဖို့ အထိ မယုံကြည်ပါနဲ့” လို့ ပြောရင် ကြားရတာ တစ်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ အစဉ်အလာကိုက မိန်းမကောင်း ပန်းကောင်းတစ်ပွင့်ပန်တို့ ဘာတို့နဲ့ နားရည်ဝခဲ့တာကိုးးးး။
အမျိုးသမီးတွေက ချစ်တုန်း မွှန်တုန်း ဒီ ရည်းစား ချစ်သူကို ယူဖို့ စဉ်းစားမှာပေါ့။ ဒါနည်းမှန်လမ်းမှန်ပါ။ ဒီလိုပဲ တွေးရမှာပါ။ အပျော်ပါလို့ တွေးတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ “အဲဒီ သကောင့်သားက ကိုယ့်ကို အတည်ယူမှာပဲ၊ ကိုယ်တို့ တစ်ချိန်မှာ ယူမှာပဲ” လို့ လုံးဝ လုံးဝ မယုံကြည်သင့်ကြောင်းပါ။ လူကိုရော ကံကိုရော ဘာကိုမှ ယုံမှတ်ပြီး ပုံမအပ်ပါနဲ့။ ယုံကြည်မှု ဆိုတာကို လူစိမ်းတစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ်မပေးပါနဲ့လို့ ပြောတာပါ။
ကျနော် ပြောနေတာ မြန်မာပြည်တွင်းနေ အရပ်သူလေးတွေကို ပြောချင်တာပါ။
ဘယ်နေရာသွားသွား ကားနဲ့သွားလာနိုင်တဲ့ ဆယ်လစ်ဘရစ်တီတွေနဲ့ စပွန်ဆာ အားကိုး လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေတဲ့ အရပ်ပျက်တွေအတွက် ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးးး
သူတို့ ရှေ့ဆောင်ဝတ်စားပြသမှုနဲ့ လိုက်အတုယူနေမဲ့ ကလေးမလေးတွေကိုပြောတာပါ။
ယောင်္ကျားတွေနဲ့ တန်းတူ ဒွေးရောရှတ်တင်နေမှ အရက်သောက်မှ ဟိုဖော် ဒီဖော်နေမှ ခေတ်မှီတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော့။ ရေစီးကြောင်း တားလို့ မရဘူး ဆိုပေမဲ့ လက်လွတ်ခြေကာ မျောပါသွားမှာထက်စာရင်ရေစီးကြောင်း ပေါ်က စီးစရာလေးနဲ့ ရေကို စုန်ဆင်းတာကောင်းတာပေါ့။
ခုလို ထိန်းသိမ်း လိမ္မာဖို့ပြောနေတာ ယောင်္ကျားယူကောင်းဖို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။
အသစ်ကြိုက်တို့ ပက်ကင်ပိတ်မှ ဆိုတဲ့ သကောင့်သားများ အတွက် လုံးဝလုံးဝ ပြောနေခြင်းမဟုတ်။။
ကိုယ့်တန်ဖိုးကို သိစေချင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်စေချင်လို့ ပြောနေတာပါ။ ကိုယ့်ကို ချစ်ဖို့ ဘယ်သူ့ဆီက မှ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ အယူမရှိပဲ မပေးတဲ့ ခေတ်ကြီးပါ။
အဲဒီတော့ အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်မှ ကာကွယ်မှ ကြားက ဥပဒေ ထုတ်စရာမလိုတော့မှာ။ အဲဒီ ဥပဒေ ထုတ်တယ် ဆိုကတည်း က ကိုယ့်လူမျိုး မိန်းမသားတွေကို အထင်သေးလို့ပါ။
မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် ယောင်္ကျားရရေးးး၊ ယောင်္ကျားက ကိုယ့်ကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ယူရေး ဆိုတာ ဘဝဖြစ်နေတဲ့ အချိန်လွန်ခဲ့ပါပြီ။ ပန်းတိုင်က ဒါမဟုတ်ပါဘူးနော်။
၄) အမျိုးသမီးနဲ့ အဝတ်အစား
သင်္ကြန်ပုံတွေမှာ တွေ့တယ်။ ဖော်ထားလိုက်ကြတာ။
ကျနော် ဟာ အသက်ငယ်တုန်းကတည်းက အဖော်အလော် အင်္ကျီသိပ်ကြိုက်တတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ လှအောင် ဖော်ထားသရွေ့ သိပ်သဘောကျပါတယ်။
ဒါကို ကို ကျနော့မျက်စိထဲ မှာ သူတို့ ဖော်တာဟာ ဘယ်လိုမှ ခံစားလို့ မရပါဘူးးးး
အဝတ်အစားမှာ စည်းတို့ ဘောင်တို့ရှိပါတယ်။ အလကားထားတဲ့ စည်းတွေမဟုတ်ပါဘူးးး
လူနဲ့ တိရိစ္တာန်မှာ ကွာတာ အဝတ်အစားပါ။ လူရိုင်းနဲ့ လူယဉ်ကျေးခေတ်မှာလည်း ကွာတာ အဝတ်အစားပါ။
ဖော်ချင်တာပဲ။ ဖော်ပါ။ ရပါတယ်။ လှအောင်လေးတော့ ဖော်ကြပေါ့ဗျာ။
နောက်ပြီး စိတ်မဆိုးနဲ့ဗျ! တစ်ခုပြောမယ်။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာ …
….ကိုရီးယားမင်းသမီးတွေ ဖော်ကြတယ်။ကျနော်တို့ မြန်မာမင်းသမီးတွေလည်း ဖော်ကြတယ်။ ဘာကွာတုန်း သိလားးး
မျက်နှာပေးးဗျ။ ကိုရီးယားတွေမျက်နှာပေးကို ကြည့်!! ဝတ်ရိုးဝတ်စဉ် ဝတ်ထားသလို မျက်နှာပေးလေးတွေနဲ့။
ကျနော်တို့ မင်းသမီးတွေကြည့်လိုက်။ “ငါ ဖော်ထားတယ်၊ ငါလှတယ်၊ ငါ စက်စီဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့ မျက်နှာပေးတို့ မျက်လုံးတို့နဲ့။
အဲဒီမှာ ကွာတယ်။ ဖော်ရပြီ ဆိုပြီး စွတ်ဖော်မှတော့ သကောင့်သားများက လာထားပေါ့ဗျာ။
ရှေးအဆက်ဆက် ယောင်္ကျားတွေ မိန်းမတစ်ယောက်ကို မြင်ရင် ဘယ်နေရာတွေ အရင်ကြည့်တတ်တုန်း အစဉ်အဆက် ရိုးရာ အဝတ်အစားဆိုပြီး လုပ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားတွေကိုသာကြည့်။ ဒီထက်တော့ မပြောချင်ဘူးးး (သိချင်ရင် မက်စေ့ပို့၊ ငိငိငိ)
နောက်ပြီး အစဉ်အဆက် နှိမ်ထားခဲ့တဲ့ အမြင်များ အရလည်း လှလှပပဝတ်စားထားရင်တောင် သူတို့ ကြည့်အောင်လို့ အလှပြင်တာဆိုတဲ့ သူများဟာ ဖော်ထားသလောက်ကို သူတို့ကို ဖိတ်ခေါ်တာလို့ပဲ ထင်မှာ မလွဲပါဘူးးး
နောက်ပြီးးး အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘယ်ဟာလှတယ်၊ ဘယ်နေရာမလှဘူး သိရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ ဖော်ချင်ရင်တောင် လှလှလေးဖော်လို့ရတာပေါ့။
ခုဟာတွေက မြန်မာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မှာ နိုင်ငံခြားသား အမြင်အရကို မလှအောင်ဖော်ထားလို့ ပြောရတာပါ။ ကျနော်တော့ ဘာမဆို လှလှပပလေးပဲဖြစ်စေချင်တာပဲ။
ကိုယ်ပိုင်ကားပေါ်က အမျိုးသမီးတွေ ဘောင်းဘီတို ဝတ်တာ အရေးမကြီးပေမဲ့ ရပ်ကွက်ထဲ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ လမ်းသလားလို့တော့ မကောင်းဘူးလားလို့ပါ။
နားထောင်တာမထောင်တာတော့ အမျိုးသမီးများ အပိုင်းပါနော့။
လုပ်ချင်ရာလုပ်ဖို့ ဆိုတာ အမြင့်ရောက်နေတဲ့ အချိန်ပဲကောင်းတယ်နော်။
တခြား အကာအကွယ် ဘာမှ မရှိတဲ့ ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်တာသာ အကောင်းဆုံးပါ။
လုပ်သင့်တာပဲလုပ်လုပ်၊ လုပ်ချင်တာပဲ လုပ်လုပ် သတိတရားနဲ့ ယှဉ်စေချင်ပါတယ်။
သူများကို ဆရာလုပ်ရတာမြန်း မောတာက အရင်။
ဆယ်လီဘ၇စ်တီတွေ ၀တ်ပြလုပ်ပြတာကို အဟုတ်ထင်တဲ့ လူတန်းစားတွေလည်း ရှိတာကိုး ကေဇီရယ်။
ဒီဖက် ၂နှစ် ၃ နှစ်မှာ ပိုဆိုးလာသလားလို့။
ဒီမို ဆိုတာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကြ၊
လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီး ဒီမိုကို အပြစ်ပုံချအောင် လွှတ်တဲ့သူကလွှတ်ထားကြ၊(ဉာဏ်ကြီးတာ)
အဟမ်းးးး ဒီနာမည် ထိပ်ဆုံးက ပါနေတော့လဲ လာရဦးမှာပေါ့
အနော်ပေါဒါ ယဉ်ကျေးမှု ဟုတ်ဖူးးး
လောလောဆယ်တော့ အဲဒါလေးတွေ ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုလိုက်ဦးမယ်
ဂွတ်ထ… ဂွတ်ထ… ကောင်းလှောင့်တေးးးး
သဘူတောရတဲ့ အဆိုတွေပါပဲ မမဂျီး
နာသင်္ကြန်တွင်း ဗိုင်းကောင်းကျေက်ဖိနေတယ်နော် ချွိချွိ ပြောတော့မာ ကြိုသိလို့
ပင်ကိုယ် စိတ်ခံ အားနည်းတဲ့ အခါ ပတ်ဝင်းကျင် အနေအထားအရ ပညာရေး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အသိပညာ တိုးတက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းနဲပါးတာတွေက ဒီအခြေအနေကိုတွန်းပို့တာပဲ။
သူတို့အသိစိတ်ထဲမှာ ဘာဝင်လာသလဲဆိုတော့ လင်ကောင်းကောင်း ဒါမှမဟုတ် စပွန်စာကောင်းကောင်း ရဖို့က ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သွားဘီ။ ငတို့ ပညာရေးစနစ်က အိမ်မက် မက်ချင်စရာ မကောင်းဘူးလေ။
နောက်ပီး ငါတို့ဒါပေးလိုက်ရင် ဒီယောက်ကျားတစ်ယောက်ကို လိုသလိုရဘီ ထင်နေတာကလဲ သူတို့ အသိပညာ မရင့်ကျက်မှုပါပဲ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မျက်မြင် ငွေကြေးပူပန်စရာ မလိုတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက ကျောင်းသူလေးတွေကိုယ်တိုင် ဒီလိုနေထိုင်နေကြတာ။
ပညာရေးက အထင်ကြီးစရာ အိမ်မက်မက်လောက်စရာ အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့အတူ ဒဂုံ တက္ကသိုလ်ကို နေပူ အသားမဲခံ ပီးဘယ်သွားမလဲ။ တည်းခိုခန်းထဲ သွားအိပ်နေတာပို အဆင်ပြေတယ်။
စိတ်ဓာတ် ဗီဇ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ခလေးတွေမှပဲ တိုးထွက်လာကြမာ။
ချွိချွက မိန်းခေးဒွေပြောပေမဲ့ ယောက်ကျားလေးတွေလဲ အတူတူပါပဲကွယ်။ ငယ်သူတွေက ကိုရီးရားမင်းသားတွေ လိုဝတ်ချင် ဆံပင်ဆေးဆိုးချင်တယ်။ လူလတ်ပိုင်းက အခွင့်အရေးရမယ်ဆို ကိုယ်ကျင့်တရားဖောက်ဖို့ ဝန်မလေးဘူး။
ရိုးသား ကြိုးစား လုပ်အားဖြင့်နိုင်ငံတည် ဆိုတာ အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ရေး တို့ တာဝန် အရေးသုံးပါးလောက် အရေးမကြီးဘူးလေ။
စိတ်ဓာတ်တွေကို စနစ်တကျ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာပါကွယ် :byee:
တမီးလည်း ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိနေခဲ့ပါတယ် မမချွိ… မမချွိနဲ့တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းထဲလည်းရှိပါတယ်ရှင့်…
အဲဒီ ပစ်မလွဲ အပြစ်ပြောနိုင်တဲ့ လူဂျီးတွေ အကြောင်း မပြောမိအောင် ရှောင်ရှားပြီး ကိုယ်ပြောနိုင်တဲ့ ဘောင်ထဲက ပြောသွားလိုက်တာဟ!
အမှန်တော့ ခေတ်ပျက်နေတာ အဓိက၊ စိတ်ဓာတ်တွေ ပျက်သွားတာက ဒုတိယ လိုဖြစ်နေတာ။
အဲလို ပုံတွေကိုပဲ မလုပ်သင့်ဘူးတို့ ရွံစရာတို့ ပြောပြောပြီး ရှယ်နေကြတဲ့ ကိစ္စ။
မကြိုက်ရင်လည်း ကိုယ့်ဝေါပေါ်အရှုပ်ခံပြီးးး ရှယ်နေကြသေးတယ်။
ကိုယ့်အကောင့်ထဲက သူများနိုင်ငံက လူတွေမြင်ရင် ပိုရှက်စရာကောင်းသေးတယ်။
အဲလို အဲလို တွေဖြစ်အောင် ဘယ်အရာ
နောက်တစ်ခုက ချွိချွိပြောသလို ကွကိုယ် တန်ဖိုးမထားတာ။
ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖေါ်သလိုတော့ဖြစ်နေပေမဲ့ မိန်းခေးဒွေကို သိစေချင်လို့ နာဆိုနာ့အလုပ်မှာ ကိုင်ထားတဲ့ ပရောဂျက်တွေက နိုင်ငံခြားရုံးခွဲမှာ စီနီယာတမ်း သွားထိုင်နိုင်သည်အထိ အခွင့်အလမ်းရှိတယ်။
ကြိုးစားစိတ်နှစ်ပီးလဲလုပ်တယ်။ ဆိုတော့ ကွကိုယ်လဲ တန်ဖိုးထားဒယ်။
ခုဏပြောသလို စိတ်ဓာတ်မကောင်း အလုပ်မကြိုးစားတဲ့သူဆို ကိုယ်နဲ့ တန်တယ်မထင်ဝူး (အာ့နဲ့ပဲ ရတော့ဝူး)
မိန်းခလေး ယောက်ကျားလေးတွေကိုလဲ အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကိုယ် တန်ဖိုးထားစေချင်တယ်။
ဘယ်သူဘာပြောပြော ကိုယ်ပိုင်အသိဥာဏ် ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားနဲ့ ရပ်တည်စေချင်တယ်။
ဟူးးးးး နာလဲမောတယ် ပေါရတာ
မ ဖော် ရ မှာ ကို ဖော် ပြ လိုက် ကြ တာ မှ ပက် ပက် စက် စက်
တ ကယ် ဖော် ရ မယ့် အ ရည် အ ချင်း ကြ တော့
ဖော် စ ရာ ကို မ ရှိ ကြ တာ လား မ သိ
ဒါကြောင့် သာမီးဆို ရီးစားထားရင် ကြိုပြောတယ်…အတင်းမယူခိုင်းဘူးနော် လို့…ကိုယ်စိတ်ပါမှယူလို့ ..ဖိအားပေးပြီး အကြပ် မကိုင်ဘူးလို့..ယောက်က်ျားတစ်ယောက်ကို မှီခိုတတ်တဲ့ အထဲမှာ မပါဘူးလို့..အဲဒါနဲ့ အခုတော့ အိမ်ထောင်မ၇ျိတာ ခြောက်ခါရှိပြီ…ခလေးကကိုးယောက်…သူတို့ က ခနခန ..လာတောင်းပန်နေသေးတာကိုး..ခစ်..
ပြောတာ အဲ့လို ပြောတာ ဟုတ်ဘူးလေ။
တူ့ဟာ တူ အညာလွယ် အညှာလွယ်ပြီး မြန်းးးး
အိမ်ထောင်မချိဘဲ ခလေးကိုးယောက်အဖတ်တင်နေတာဒေါင် ဒင်းကိုကျိ လက်သီးလက်မောင်းတန်းပီး စပ်စလူးယမ်းနေဒုံး ဒဂယ်ပါ အိုက်သက်တိကို လေးဇားဒယ်
လုပ်အုံးလေ သင်တန်းပေးပို့စ်ဒပုတ်လောက် ဘိုင်းကောင်းကို ကျောက်ဖိပါ (ကျောက်ဆိုလို့ အူးကျောက်တျောက်တောင် အားယဲ့လားမတိ) အညှာခိုင်ပါ မနုံဘာနဲ့ ဆိုတဲ့ အံတီကေဇီကို ပြန်ကစ်ပလိုက်ဇမ်းဘာ သာမီးလေးတို့ကလဲ အိုက်လိုထဲမှာပျော်နေတတ်တဲ့ လူဂျီးတမီးတွေဘာလို့
အာ့ဂျောင့်ဖစ်မယ် ဆွေဆွေက ရပ်ကွက်ထဲမာဆို စတားဒဲ့
ကေဇီ ရဲ့ ရေး ချက် ပက် ပက် စက် စက် ကို ထောက်ခံပါကြောင်း
အနော်လည်းအပြောခံလွတ်ရအောင် ဗိုင်းးကျောက်ဖိ ပိ နေကြောင်း
အန်တီKZကို တကူးတက လာသတင်းပို့ တာပါခင်မျ။
အဖော် အချွတ် လုပ်ကြသူတွေထဲ ရွာသူလေးတွေ ပါမယ် မထင်
အဖော် အချွတ် လုပ်နေသူများရော ဒီ ပို့စ် ကို ဖတ်ခွင့်ရပါ့မလား ဖတ်ချင်ကြပါ့မလား မသိ
အခုလို ပို့ စ် တွေရေးပြီးပြင် ဖို့ကြိုးစားကြမလား။
ဒီပို့ စ် ကို သူတို့ဖတ်မိကြပါ့ မလား။
ကြယ်ငါးလေးတစ်ကောင် လို့သ ဘောထားရမှာပါပဲ။
တစ်ပိုင်းလောက် သောက် ရင် ကို မူးချင်သလိုလို
ကြည့်…ခုထိ အူက ရိုင်းတုန်း…ဟေးဟေး။
ဒီရွာမှာ ရေးလို့ ဒီ ရွာသူတွေကို ပြောတာလည်း ဟုတ်ဘူးလေ။
စာနဲ့ရေးပြီး တားလို့ မရမှန်းလည်းသိတယ်လေ။
ခုဟာက သင်္ကြန်မှာ အပေါ်က ဟာတွေ ပေါင်းပြီး လူမြင်မကောင်း သူမြင်မကောင်း ဖြစ်နေလို့ရေးတာလေ။
မောင်နှမ သားအမိ မြင်လို့မှမသင့်တော်ဘူး
ခေတ်မီတာတို့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တာတို့ဆိုတာ တခြားနေရာတွေမဟုတ်ပဲ ဒီနေရာမှလာမီနေတယ်
ဂလို ပြောရဲလို့ ငါ့ မောင် ကော်မန့်ကို အပေါင်း တစ် လိုက်တယ်။
a moderate consumption of alcohol is good for health
what is the limit call moderate
and then drinking like normal person is no longer possible (increase initial tolerance)
အာဟိ သန်ရာ သန်ရာ တွေးဂျပီး ချွိပို့စ်ကြီးက ပျော်စရာ ဂျီးကိုဖစ်လို့
” ဟိုတယ်ခေါ်သွားပြီး ဗီဒီယိုပါရိုက်ထားတယ်တဲ့။
သူတို့ အခေါ် အဝေါ် ဘူဖေးစားတယ်ခေါ်သတဲ့။
နောက်ပြီး အဲဒီ ဗီဒီရိုနဲ့ ငွေညှစ်သလိုပဲ အဲဒီကောင်မလေးကို
ခြိမ်းချောက်ပြီး လိုတိုင်းခေါ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ”
ဘူဖေးစားတယ် ။ လိုတိုင်းခေါ်သုံးတယ် ။
အားပါးပါး ၊ အခုခေတ် ကောင်လေးတွေ ၊
၁ ။ တော်တော် ဆိုး / ယုတ်မာပါလား ။
၂ ။ သူတို့မို့ ထောင် မကြောက် ၊ တန်း မကြောက် ။
အဘ တို့ တောင် လိုက်မမှီတော့ဘူး ။
( အဘ တို့က ဆိုးချင် ဆိုးမယ် ၊ မယုတ်မာဘူး )
” ယောင်္ကျားတွေ မိန်းမတစ်ယောက်ကို မြင်ရင် ဘယ်နေရာတွေ အရင်ကြည့်တတ်တုန်း ”
ဘုရား ပေးပေး ၊ ကျမ်း ပေးပေး ၊
အဘ ကတော့ မျက်နှာကို အရင်ကြည့်တာပါကွယ် ။
အဘ က မိန်းမချောလေးတွေကို သဘောကျပေမယ့် ၊
Sex ကိစ္စ အတွက်တော့ ငန်းငန်းတက် မဖြစ်ရပါကွယ် ။
နို့ ဆာလွန်းရင် ဝယ်စားမှာပေါ့ ၊ ရှားမှ မရှားတာ ။
ဒေါ်လှ ၁၀၀ လောက်ဆို ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးစုံ ရနေမင့်ဟာ ၊
ဘာ ဒီ Sex ကိစ္စ အတွက် ရာဇ အိနြေ္ဒ အပျက်ခံရမှာလဲ ။
” ဖော်ချင်ရင်တောင် လှလှလေးဖော် ”
ဟုတ်ပါ့ ။ ကိုယ့် အခြေအနေ ကိုယ်သိပြီးမှ ၊ ဖေါ်ကြပါကွယ် ။
ဟိုတစ်နေ့က ” ဇသဇ ” ဇာဝမ်းဆက် နှင့် ဓါတ်ပုံတွေ တွေ့ရတာ ၊
ကြာကြာ ဆက်မကြည့်ရဲဘူး ( ကန်တော့ပါရဲ့ ) ပန်းသေမှာ စိုးလို့ ။
မချောတာ မလှတာ ကို အပြစ်တင်တာ မဟုတ်ဘူးနော် ။
မချောရင် မလှရင် လည်း သင့်တင့်အောင် နေကြမှပေါ့ကွယ် ။
တစ်ချို့ က ခိုးစား လုစား လိမ်စား လှည့်စား ရတာမှ ပိုကောင်းတယ်ထင်တော့လည်းး ရက်စက်ရုံ မက ယုတ်မာတဲ့ထိကို ရောက်ကုန်တာ..
အောင်မယ်လေး ပြေးလာရတာမောထှာ။ ဘယ်လိုထောက်ခံရမှန်းတောင်မသိပါဘူး ချွိချွိရယ်။ သဘောကျလွန်းလို့။ ခုသင်္ကြန်ပြီးတော့ တွေးနေတာ။ သင်္ကြန်မြင်ကွင်းတွေကို ဖေ့ဘွတ်မှာရေးရင်ကောင်းမ လား ရွာထဲရေးရင်ကောင်းမလားလို့တွေးနေတာ။ အမြင်မတော်တာလေးတွေပြောချင်တာလေးတွေ အူယားနေတာလေးတွေပေါ့။ ချွိချွိပြောတာတွေလဲ အတော်များများပါသား။ အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေ အရမ်းစိတ်ဓါတ်ပျက်နေတာတွေ တွေ့လာရတော့ မောလိုက်တာအေရယ်။ သင်္ကြန်မြင်ကွင်းလေးကို ပိုစ့်တပုဒ်တင်လိုက်ပါအုံးမယ်။ ချွိချွိပြောတာလေးတွေ ပိုရုပ်လုံးကြွလာအောင်။ သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့မှာ အတော်မောလာတယ်အေရယ်။
ရေးပါ မွသဲရေ။ လာခဲ့မယ်
(အဘ တို့က ဆိုးချင် ဆိုးမယ် ၊ မယုတ်မာဘူး)
ကျနော်ကတော့ မူရင်းမသိစိတ်က လူဆိုးနဲ့လူယုတ်မာကြားတဲ့ကအဆင့်ဗျ
ဒါပေမဲ့အသိစိတ်က လူယုတ်မှာမဖြစ်ချင်တော့ တက်စာလေးတွေရှောင်ရတာပေါ့
ကြုံလာရင် ရှောင်နိုင် မရှောင်နိုင် ကသိပ်မသေချာဘူး
ကိုယ့်ဟာကို မရွံချင်တော့ ဝေးဝေးရှောင်တယ်အဘ
ဒါနဲ့စကားမစပ် သဂျီးနဲ့ အဘဖောကို အရင်ကာလတွေက ကံသုံးပါးနဲ့ပြစ်မှားမိတာရှိရင်ခွင့်လွတ်ပါလို့
နောက် မကျေလည်တာရှိလာပြန်တော့လည်း နောက်နောင်ပေါ့နော
ပြောချင်နေတာ ပြောချင်နေတာ အံကိုက်ပဲ မမကေဇီရယ်
တော်လိုက်တဲ့ အစ်မ ရွှေကြည်အားကျရပြန်ပြီ
ပြီးတော့လေ သင်္ကြန်လည်မယ့် မိန်းကလေးတွေကို အ၀တ်အစားဝတ်ဆင်နည်း
မြင်ရတာ စိတ်လေလွန်းလို့ လှုပ်နေရင်ပြီးရောဆိုပြီးများ လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်နေကြသလားပဲ
ယောက်ျားလေးတွေမူးမူးရူးရူးကချင်သလို က ကြတာ ပြသနာမရှိ
မမကေဇီပြောသလိုပါပဲ ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးနဲ့ ကိုင်မပေါက်ချင်ဘူး
လူလာအောင် လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ပဲ လာမှာပါ။
နောက်နှစ် စိတ်ရော လူရော လုံခြုံ တဲ့ မန်းဒပ်မျိုး လူဝင်အောင် လုပ်ပြချင် စိတ်ပေါက်တယ်။ စီဒီ တူ သကြားး
ကုန်ရတဲ့ ဟာတွေ လှူလိုက်ရရင် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ မို့။
သင်္ကြန်အကြောင်း တွေးမိတိုင်းမှာ ဒီကိစ္စ တွဲပါလာတတ်တာ ကြာပြီ။
တွေးမိတိုင်းလဲ အမေမာ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ ပြစား ပြစား မနေရဘူး ဆိုတာကိုပဲ သွားသွား သတိရနေတယ်။
အရက်ကိစ္စတော့ ထားပါ ကိုယ်ပြောရင် မျက်မမြင်ပုဏ္ဏား ဆင်စမ်းသလိုဖြစ်မှာဆိုတော့ မပြောတော့ပါဘူး။
ချစ်သူရည်းစားကိစ္စမှာတော့ ခေတ်မီတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်စေချင်တယ်၊ ပြီးတော့ သူများလုပ်တိုင်း လိုက်လုပ်တာက ခေတ်မီတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲ သိစေချင်တယ်၊ နောက်ထပ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်သူမှ လိုက် စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ မလွယ်ဘူးလို့လဲ ပြောချင်တယ် (ဟူး ဘာတွေပြောနေမိပါလိမ့်)
ပြောရလွန်းလို့ မပြောဘဲ ဒီအတိုင်း ထိုင်ကြည့်နေတာပဲ မျက်စိအေးမလားမသိ
တကယ်တော့ သိုဝှက်ထားတာကို မှန်းဆကြည့်ရတာလဲ အလှတရားတစ်ခုပါပဲ
အခုတော့ အလှတရား ဆိုတာကို အဖော်အချွတ် လို့များ ဘာသာပြန်လိုက်ကြသလားမသိပါဘူးဗျာ။
အဲဒီလိုမှတ်နေတဲ့သူ များနေတော့ သင်္ကြန်ဟာ တဖြည်းဖြည်း လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရတဲ့ပွဲကြီးကို ဖြစ်လို့။
စိတ်ဓာတ်တွေ၊ ခံယူချက်တွေ ပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ သင်္ကြန်ရဲ့ အနှစ်သာရဟာ ပျောက်စ ပြုလာတယ်။
ဘယ်အယူကပဲ ဆင်းသက်လာပါစေ။ ပုဂံခေတ်ကတည်းက အခြေတည်နေခဲ့တာမို့ ရိုးရာအဖြစ် ပြောလို့ရနေပါပြီ။ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတဲ့အထဲကိုလည်း ဝင်နေပါပြီ။
ခေတ်ရေစီးဟာ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ရိုးရာတွေကို တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းပေးတတ်တာ မှန်ပေမင့် အခုဖြစ်နေတာကတော့ ခုန်ကျော်ပြီး သွားနေကြသလိုပဲ။ တစ်ခါကဖတ်ဖူးတဲ့စာသားတွေလို ခရိုနီ သင်္ကြန်၊ အီကိုနော်မီ သင်္ကြန်၊ စပွန်ဆာ သင်္ကြန်ဖြစ်နေတယ်။
ဒီခေတ်မှာမှ သပြေခက်နဲ့ ရေပက်ချင်လို့ မရတော့ပေမယ့် အဲဒီခေတ်ကိုပြန်သွားချင်နေမိတာတော့ အမှန်ပဲ။
ပြောခဲ့ဖူးသလို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ငါးဆယ်လောက်က သင်္ကြန်ပုံစံမျိုး ပြန် ဖန်တီးချင်စမ်းပါဘိ ဗျာ။
နှစ် ၅၀ လောက်ကထိ မလိုပါဘူးးး
ဒီလိုမျိုးတွေ စိတ်ကုန်တဲ့ မိသားစုတွေက ရပ်ကွက်ထဲမှာ မိသားစုမန်းဒပ်မျိုးတွေ စတုဒီသာလုပ်တာမျိုးတွေ တစတစလုပ်ပြီး အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေ ဒေးကလပ်သာသာ မန်းဒပ်တွေ မရောက်တော့မဲ့နေ့တွေဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။
(ရေစီးကြောင်း ပေါ်က စီးစရာလေးနဲ့ ရေကို စုန်ဆင်းတာကောင်းတာပေါ့။)
ကောင်းမှာပေ့ါ ချွိချွိ ပဲလေ။
အလုပ်လေးပါး အချိန်လေးရရင် ရွာထဲဝင်မိတာက တစ်ကြောင်း
ရွာထဲဝင်မိပြန်တော့ ဖတ်ဖြစ်မိသွားတာက တစ်ကြောင်း
ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ပြန်ပြီးဘာမန့်ရမလဲ မတွေးတတ်တာ တစ်ကြောင်း
မန့်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေးမိသော်လည်း မန့်လို့ဖြစ်ပါ့မလားပြန်အတွေးဝင်တာက တစ်ကြောင်း
မန့်လိုက်ပြီးရင်လည်း ဘယ်သူကဘယ်လိုဘာများပြန်ချေပမန့်ထားလဲ သိချင်တော့ ပိုစ့်ကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်ဖြစ် မှာကတစ်ကြောင်း
အဲဒီအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ကျုပ်လည်း မမန့်ဖြစ်တာကြာပေါ့ကွယ်။
အခုတော့ မန့်လိုက်မယ်ဆိုသော်လည်း အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ပိုစ့်ဖြစ်နေတာကြောင့် တစ်ကြောင်း……။
အနော် ဘယ်တုန်း က အနော့ ပို့(စ) မှာ ဘာတွေ သတ်မှတ်ထားလို့တုန်းးး
စိတ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောချင်ရာ ပြောသွားလို့ ရပါတယ်။
ဆိုပြီးရေးတဲ့ ရေးဟန်လေးအတိုင်း လိုက်ရေးကြည့်တာပါဗျာ။
ဘယ်ပိုစ့်မဆို မန့်လိုရမှန်း သိပါတယ်ဗျ။
သင်္ကြန်ဆိုတာ ဟိန္ဒူအယူအဆကနေ ဆင်းသကါလာတယ်လို့သဂျီးကတော့ ပြောဖူးတယ်ထင့်
ကဲ ဒါဆို ဒီလိုလုပ်
သူတို့သင်္ကြန်လို ဆာရီတွေခြုံပြီး ဆေးရောင်စုံ အရည်တွေနဲ့ပက်ကြ
နောက်များမှ ဟိန္ဒူတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့သင်္ကြန်ျလးရေးပါဦးမယ် ။
သများတို့ဖြင့် ပျော်ချင်လို့မှ ပျော်မရ။
ဘာမှမီပေါချင်လို့ မီပေါတော့ဘူးနော… :byee:
ဘာဖစ်ရို့ မီပေါချင်ဒါရဲ ဆိုဒဲ့ အကြောင်းပြချက်လေးးးး တစ်ဆိတ်လောက်..!!
နေဂျင်ဒလို နေဂျဒါ ..
ဘာဒေ တွားပြောနေဒါဒုံး …
မကျေနပ်ယင် သူရို့လို နေဘာလားလို့ … ဟွန့် ..
နာ့ ခုလောက် လောက် နေချင်သလိုနေ ပြောချင်သလို ပြောတာတောင် အတော်လွန်လှပြီ။
.. ဟောရင်းသာ ပျံလွန်တော်မူသွားမယ့် ကိစ္စထဲမှာ ဒါတွေလည်းပါတယ်.. ခေတ်ပျက်မှာ ကြီးလာပြီး ခံယူချက်တွေ အတွေးအမြင်တွေကိုက ဒီလိုဖြစ်နေတော့ ပြင်ဖို့မလွယ်ဘူး.. ကိုယ့်ထက်ခေတ်ပျက်တဲ့ အာဖရိက ကနိုင်ငံတွေမှာဆို ၁၀ နှစ်ကျော်ကလေးတွေ သေနတ်တကားကားနဲ့နေကြတာ၊ အဝတ်အစား အနေအထိုင်ပျက်ဆီးတာထက်ဆိုးသေးတာပေါ့.. သွားဆုံးမလို့လဲမရ.. မူလအကြောင်းအရင်းဖြစ်တဲ့ ခေတ်စနစ်ပျက်ဆီးတာကို ပြင်ရင်းနဲ့မှ သက်သာသွားမယ့် ရောဂါလက္ခဏာလို့မြင်တယ်.. ဒီကြားထဲတော့ ကိုယ်နိုင်ရာ လက်လှမ်းမှီရ ဆုံးမပြုပြင်ကြပေါ့..
Ham?? Who r u??
ထောက်ခံမဲ အင်ဖနတီပေးပါတယ် …
အနော် စံပြုတဲ့ မိန်းမထဲ မှာ ဝေ လည်း ပါတယ်။
အနော် ဝေ့ကို ချစ်တယ်၊
ဖွဘုတ်က မ လာတယ်
သြော်… ငါ့မလဲ သင်္ကြန်ကို ရှောင်သာရှောင်နေတာ သံယောဇဉ်က မပြတ်
April 12 at 3:57pm · Edited ·
သင်္ကြန်မိုးဇာတ်ကားရိုက်တော့ ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ရောက်နေပြီ အဲဒီကားထဲမှာ ကဖို့ လိုတဲ့သူတွေကို တက္ကသိုလ်ထဲလာရှာလို့ မှတ်မိနေတာ အဲဒီခေတ်က သင်္ကြန်လည်း ပြောရရင် သိပ်မစည်ဘူး။ နောက်ပြီး ကဲတာမူးတာတွေ လည်း ရဲရရတင်းတင်းမလုပ်ရဲကြပေမဲ့ စရှိနေပီ ဖန်စီဒိုင်းတွေ ကော်မက်သာဇင်ဆိုတာတွေလည်း စရနေတဲ့ခေတ်လို့ ပြောလို့ ရတယ်။ သင်္ကြန်ကို အစိုးရက ဝန်ကြီးဌာန မဏ္ဍပ်တွေ နဲ့စည်အောင် ဇွတ် လုပ်ကြတဲ့ ခေတ် ပေါ့။
အဲဒီအချိန် သင်္ကြန်မိုးဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားထွက်လာတယ်။ အရင် နှစ် ၂၀-၃၀ က မြန်မပြည် က ရိုးရာသင်္ကြန်ကို သူပြန်ပြထားတယ် သူပြချင်တဲ့ လက်ရှိသင်္ကြန်ဆိုတာထက်ဖြစ်နေတဲ့ ထဲက ဖြစ်သင့်တာတွေ ရိုက်ပြတယ် သီချင်းတွေ အပြည့်နဲ့ ထွက်လာတယ်။ အဲဒီကားပြီးတဲ့နှစ် မှာ မန်းသင်္ကြန် ပိုစည်ကားသွားပြီး နောက်နှစ် အကယ်ဒမီရပြီးနောက်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးက အဲဒါ မန္တလေးသင်္ကြန်ဆိုတာပြီး တကူးတကာ ကို လာပြီးပျော်ကြတယ်။
ခေတ်က လည်း အပြောင်း အရေးအခင်းအပြီးမှာ ကုမ္ပဏီတွေ ပေါ်လာတယ် ကြော်ငြာတွေပြန်သက်ဝင်လာတယ် ကားတွေ ဈေးပေါသွားတယ် ဆိုတဲ့ခေတ် ရောက်သွားတော့ ကား ပေါပေါများများပြန် ရှိတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ အတော်စည်တယ်လို့ ပြောတာထက် ပြန်စည်လာတယ်လို့ပြောရမလိုပါဘဲ။
သူကားထဲမှာ ၁၉၈၄ က နေ ၁၉၅၄ လောက်ပြတော့ အနှစ် ၃၀ ဆိုရင် အခုလည်း အနှစ် ၃၀ တိုင်ပြီ။နောက်တစ်ခေတ်ရောက်ပြီပေါ့။ ပြောရရင် တိုက်ဆိုင်စွာ နဲ့ဘဲ အပြောင်းအလဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပြီ အဲဒါက ၂၀၁၀ ပြီးခေတ် ပြောင်းလာပြီး ၂၀၁၅ ကို မျှော်နေကြပြီ တကယ်တော့ ဒီအချိန်မှာ သင်္ကြန်ကို ပြန်ပြီး Phoenix ငှက်လို့ အသက်ပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်။
မကောင်းတဲ့မိန်းခလေးအချို့တွေ ဖော်ပြီး ဝတ်တာ မူးရာဇ်ဆေးစွဲတာတွေ စတဲ့ အဆိုးတွေကို ခေတ်ပေါ် FaceBook ပေါ်မှာ ပွားတာတွေကိုဘဲ အဟုတ်ထင်နေကြမဲ့ အစား မြန်မာသင်္ကြန်ဆိုတာ ဒီလိုဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကို သေချာ ပုံစံချပြီး နေရာသတ်မှတ် ပြီး။ ဖြစ်သင့်တာကို ဇွတ် မတင်းကျပ်ဘဲ လက်ခံသူတွေနဲ့ စလုပ်တာမျိုး အဲဒီပွဲကို လာသူတွေကိုလည်း အဲဒီထဲဝင်ဖို့ စည်းကမ်းတွေ ဘာတွေနဲ့ သတ်မှတ် ကန့်သတ်တာမျိုး လုပ်ပြီး သတ်မှတ်တဲ့ နေရာကွက်ကွက်လေးမှာ မှာ စဖန်တီးမယ် အဲဒါကို အများလိုက်လက်ခံအောင် စည်းရုံးမယ် မီဒီယာတွေကနေ ဖြန်မယ် ပုံဖေါ်ကြမယ် ဒီကနေ နောက်ထပ် သင်္ကြန်မိုးလိုဇာတ်ကားရိုက်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ Kyaw Zaw Lin က မနေ့ကပြောတာ သဘောကျတယ်။
တကယ်တော့ သူဖာသူ ပရမ်းပတာဖြစ်လာတာကို မျှောလိုက်ဖို့ ထက် အကုန်မပျက်ခင် သန့်စင်ဖို့ လိုချင်တဲ့ ဖက်ဆိုတာ ကိုကိုယ်တွေတိုင် မောင်းနှင် သွားနိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားနိုင်ဖို့ ရှိနေတဲ့ စာရေးဆရာတွေ ဒါရိုက်တာတွေ စိတ်ပါဝင်စားသူတွေ နာမည်ပျက်တာကို ရှက်တတ်သူတွေ စိတ်ပါသူတွေ ဝိုင်းပြီး သေချာပြန် လုပ်ကြရင် မြန်မာသင်္ကြန် တစ်ခေတ်ဆန်းပြန်ထ လာမယ်လို့ယုံကြည့်မိတယ်။ တကယ်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် လူတွေအားလုံးက လွန်လာပြီးဆိုတာသိတယ် အပုတ်နံကလည်းထွက်တယ် ကောင်းစေချင်စိတ်လည်း ရှိကြတာ တွေက ရင်ခုန်သံတူတယ်ဆိုရင်တော့ အပုတ်တွေကိုဖယ်ပြီး အသစ် ဆောက်တာ ပါကြမယ်လို့ ထင်တယ်
စိတ်ကူးယဉ်ကြည်တာပါ။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
တို့ ရဲ့ နိုင်ငံကျော် အိုင်ဒေါ တွေ ပါလာရင်တော့ အကောင်းသားကလားးး
ခက်တာက တို့ က ယူချင်တဲ့ အပိုင်းကွက်ယူကြတာရယ်။
အဲလေ ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူးးး
သင်္ကြန်မှာ ဒုလ္လဘသာဝတ်တာရယ် မဝတ်ခင်ကတည်းက စိတ်က တစ်မျိုးဖြစ်နေတာ
ပြင်ချင်စိတ် ရှိရဲ့နဲ့ ရှောင်ပြေးတဲ့သဘောဖြစ်နေလို့
ပြီးတော့ ကြည့်လိုက်တော့လည်း အတော်များများက စိတ်ကုန်တဲ့အကြောင်းပဲ ပြောနေတာလေ
တကယ်တော့ ကျနော်တို့က လေပဲများနေသလို…လို… လို….
ဟီးး ကိုယ်တိုင်လဲ ထို့အတူ
ဒီ Post က ရွာထဲ မရှိတုန်း လွတ်သွားတာကိုး။
အနားရှိရင် အာဘွား ပေးလိုက်ချင်ရဲ့။
မြန်မာပြည်ထဲ မှာမို့ ဒီလို ထိန်းခိုင်း တာ။
အနောက်တိုင်း မှာ ဘယ်ရမလဲ ပြောကြမယ်။
ဒီက ကလေး ကျောင်း မှာ ဇီဇီ ပြောသလိုဘဲ သင်ကြားပါတယ်။
အနောက်တိုင်း မှာလဲ သူ့ အဆင့် နဲ့ သူ ဝတ်စား နေထိုင်ပါတယ်။
ယူကေ မှာ ကော်လာဖြူ လူတန်းစား က သူများ အများစု နီးပါး အရက်မသောက်၊ ဆေးလိပ်မသောက် ကြတော့ပါ။
ရုံးချိန်ပြီးရင် တစ်ချို့ အားကစား ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ပါတယ်။
သူတို့ ရဲ့ Life style က အတော်လေး ပြောင်းလာပါတယ်။
အမှန်တော့ ဒီမှာ မိန်းကလေး တွေ အရမ်း မတိုကြ၊ မဖော်ကြပါဘူး။
ကိုယ်က တော မှာ နေလို့လားတော့ မပြောတတ်။
ကလေး ကျောင်းက တစ်ခါ ပြင်သစ် ကို ခရီး သွားပါတယ်။
အဝတ်အစား အတို အနှံ့ အပေါ် များ မဝတ် ရ လို့ အမိန့် ထုတ် ပါတယ်။
ပြင်သစ် ရဲ့ တစ်ချို့ နေရာ တွေ က အဝတ်အစား ကြည့်ပြီး လူတန်းစား ခွဲ တတ်သတဲ့။
ဒါကို အနောက်တိုင်း ကို ခိုးချ ချင်တဲ့ မြန်မာ တွေ သိစေချင်ပါရဲ့။
ကိုယ် အဟုတ်လုပ်ပြီး ဝတ်နေတာ သူများနိုင်ငံ ရဲ့ မကောင်းတဲ့မိန်းမ တွေ ဝတ်တာမျိုး ဆိုတာ။
အတုယူမှုစံလွဲနေတာဘာအရီးရေ….တကယ်တမ်း လေးစားအားကျရမဲ့ လူတော်တွေ ရှေ့မထွက်ကြတာလဲ ပါပါတယ်။
ကျောက်ခဲတွေ ရေပေါ် ပေါ်တဲ့ခေတ်လေ။
ဒါတောင် အမေစုတစ်ယောက် လူရှေ့ထွက်ခွင့်ရတာ ဘုရားမ တာဘဲ။
မဟုတ်ရင် မြန်မာမော်ဒယ်တွေ လုပ်ပုံနဲ့ မြန်မာ ၀တ်စုံကို ရင်တ၀က်ဖေါ် ပေါင်တခြမ်းဖေါ်ပြီး ၀တ်ကြတော့မှာ
ဘယ် မော်ဒယ်မှန်းတော့ မသိ။
မြန်မာ ဝတ်စုံကို လုပ်ရက်တာ။
အာ့ကျတော့ ကိုယ်လုံးတီးရိုက်တာကိုပဲ အားပေးတယ် ကွီ။
ယူအက်စ်မှာလည်း… မိန်းကလေးတွေ.. သာမန်အားဖြင့် အရမ်း မတိုကြ၊ မဖော်ကြပါဘူး။
ကောလိပ်ကျောင်းသူ မိန်းကလေးတယောက်ဖေါ်ပြီး.. လမ်းဘေးလမ်းလျှောက်နေရင်.. လူတွေဝိုင်းကြည့်မှာပေါ့..
အဲဒီလိုမျိုး.. ကလပ်မှာသွားဖေါ်ရင်.. ဘားမှာအလုပ်သွားလုပ်ရင်.. ခုနှစ်လွှာချွတ်သွားကရင်.. ငွေရမယ်လေ..။
အဆင့်အတန်းရှိတဲ့.. လူကုံထံသူဌေးကလပ်မှာ.. ဒင်နာမှာဖေါ်ရင်တော့.. သူဌေးလူပျိုနဲ့ညှိနိုင်သမို့.. ငွေနဲ့စက်ကြည့်နိုင်ပြန်ပါရော…။
အစိုးရဥပဒေအရ.. ဖမ်းခွင့်.. ဒဏ်ချခွင့်ရှိသဗျ..။
nude in public (NIP) တဲ့..။ ဘေးကကလေးသူငယ်တွေရှိရင်လည်း..သူတို့တွေစိတ်ဓါတ်ထိခိုက်သမို့.. မိဘတွေက..တရားစွဲခွင့်ရှိသပေါ့..။
nude in public (NIP) ဥပဒေတွေပြုသင့်တယ်..။
အဲဒီ၂ခုပြီးတဲ့နောက်.. သင်္ကြန်မှာ.. ပါ့ဗလစ်မှာ မဖွယ်မရာလုပ်သူတွေမနည်းသွားရင်.. ကျုပ်လာပြော…။
အောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းနဲ့ ပိတ်လို့ ဘယ်သူမှ ရှေ့က အတည်ပြောတာတွေကို ယုံမှာမဟုတ်ဘူးး
အခုဘဲ TED က ဟောပြောပွဲ မှာ နောက်သွားတာ ကြားလိုက်တယ်။
သူကြီး ဆီ က idea ကော်ပီ ကက် သွားတာ ထင်ရဲ့။
ဒါပေမဲ့ သူတို့က သူကြီး ထက် ပို ရက်ရောသေး။ 10 trillion dollars ပေးတာတဲ့။
ပေါင်မုန့် တစ်လုံး တော့ ရကောင်းပါရဲ့။
In fact, the winners have to pay their own way to come to the Ig Nobel ceremony, which most of them do.
Last year, though, we did manage to scrape up some money.
Last year, each of the 10 Ig Nobel prize winners received from us 10 trillion dollars. A $10 trillion bill from Zimbabwe.